MomsRising.org | Waxyaabaha aad dooneyso in aad ka ogaato Barnaamijka Fasaxa Caafimaadka iyo Qoyska oo Mushaharkooda u Soconayo
Waxyaabaha aad dooneyso in aad ka ogaato Barnaamijka Fasaxa Caafimaadka iyo Qoyska oo Mushaharkooda u Soconayo
Ma maqashay wararka cusub? Waxaa la filayaa in Gobolka Washington...laga bilaabo bisha Janaayo 2020 uu bilaabo bixinta lacagta Fasaxa caafimaadka iyo Qoyska! Taas waa sax, Barnaamijka Bixinta Mushaharka Fasaxa Caafimaadka iyo Qoyska waxa uu shaqaalaha u ogolaanayaa in ay fasax qaataan marka uu qoyska ilmo u dhasho, reerka uu qof ka xanuunsan yahay, ama ka soo kabanayaan xanuun khatar ah oo ku dhacay. Soo booqo boggan si aad xog dheeraad ah uga ogaato barnaamijkan cusub, oo aad kombiyuutarka ka soo dajisato xogta aad u baahan tahay iyo talaabada aad qaadeyso.
Fadlan sida lacagta aad shaqeyso laguu siiyo si aad u xisaabto.
Inta aad ku shaqeyso saacaddii: $
Saacadaha aad shaqeyso:
Lacagta aad sanadkii ku shaqeyso: $
Lacagta lagu siinayo:
U isticmaal xisaabihayn in aad ku ogaato lacagta fasaxa caafimaadka iyo qoyska ee lagu siinayo todobaad kasta. Saacadlayaasha, geli lacagta aad ku shaqeyso saacaddii iyo celcelis ahaan inta saacadood ee aad shaqeyso todobaadkii.
Mushaharlayaasha, geli mushaharka aad sanadkii ku shaqeyso. Haddii aad ka shaqeyso laba shaqo, geli macluumaadka laba jeer oo lacagta mid walba kaaga soo baxda isku dar.
Waxyaabaha Aasaasiga Ah
Haddii ilmo aad dhashey oo aad ku faraxsan tahay, ama hooyo xanuun la il daran, ama qofka nolosha kulawadaaga oo kansar ku dhacay, in aad la joogto oo waqti la qaadato ayaa aad muhim u ah. Lacagta uu bixiyo Barnaamijka Fasaxa Caafimaadka iyo Qoyska waxa uu qoysaska ka caawinayaa dhaqaalaha ay u doonayaan si ay sidaas u sameeyaan -- culeysna kuma ah goobaha ganacsiga inta uu shaqaalahoodu fasaxa ku maqan yahay.
Waa imisa mudada Fasaxa Caafimaadka iyo Qoyska sidee ayaase loo adeegsanayaa?
Sanad kasta, shaqaalaha waxaa loo ogol yahay:
12 todobaad oo fasax ee lacagta la siinayo si ay u wehliyaan ilmaha u dhashay, korinayaan, ama la nool ama sey/xaas, ilmo, walaal, ilmo ay ilmihiisu dhaleen ama awoowo/ayeeyo u yahay (oo ay ka mid yihiin kuwo qaangaar ah) oo xanuun la il daran AMA
Fasax 12 todobaad ah oo caafimaad si ay uga soo kabtaan xaalad caafimaad oo la soo deristay (tusaale ahaan, qaliinka dhalmada ka dib -- fasaxa looma qaadan karo hargab ama xanuun yar)
Shaqaaluhu waxa ay wada qaadan karaan fasaxa qoyska iyo fasaxa caafimmadka si ay u helaan 16 todobaad oo lacag la siinayo. Taas waxaa loola jeedaa waalidka ilmo dhala waxa uu qaadan karaa 16 todobaad oo fasax ah iyada oo waalidka dhibaato kala kulma uurka, sida ay dhakhaatiirtu u qeexeen uu qaadan karo 18 todobaad oo fasax lacag la siinayo.
Yaa maalgeliya Fasaxa Caafimaadka iyo Qoyska?
Fasaxa Caafimaadka iyo Qoyska ee shaqaalahu lacagta la siinayo waxaa laga bixinayaa ceymiska gobolka oo shaqaalaha iyo loo shaqeyaha lacag ku darayaan laga bilaabo 1da janaayo 2019. Qofka shaqaalaha ah waxa uu ku bixinayaa $2 todobaadkiiba oo laga jarayo jeegga mushaharka. Ganacsatada ay u shaqeeyaan wax ka yar 50 shaqaale (oo ah 96% ganacsiga Washington) waxa ay kala dooranayaan in ay ceymiska lacag ku bixiyaan ama shaqaalahooda aanay wax lacag ah ka Ceymiska Shaqada ee Washington. Ganacsatada ay u shaqeeyaan shaqaale ka badan 150 shaqaale ee doorta in ay bixiyaan lacagta ceymiska waxaa loo fidinayaa gargaarka ganacsatada yaryar si looga caawiyo kharashka inta shaqaaluhu fasaxa ku maqan yahay.
Yaa xaq u leh inuu qaato Fasaxa Caafimaadka iyo Qoyska ee Mushaharku u soconayo?
Qof kasta oo hal shaqo ama laba goob shaqo ka shaqeeyey ugu yaraan 820 saacadood sanadkii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan shaqaalaha dawladda ama kuwa xilliga dhiman, ayaa xaq u leh fasaxa caafimaadka iyo qoyska ee lacag la siinayo. Dadka iskood u shaqeysta waa ka qeyb qaadan karaan barnaamijka.
Sidee ayaa Fasaxa Caafimaadka iyo Qoyska ee lacag la siinayo u shaqeeyaa?
Laga bilaabo 1da Janaayo 2020, shaqaalaha waxa ay telefoonka, ama foomka la buuxiyo ku codsan karaan lacagta Fasaxa caafimaadka iyo Qoyska iyaga oo u soo gudbinaya Waaxda Ceymiska Shaqada (ESD), iyaga oo soo raacinaya macluumaadka ugu yar ee laga doonayo loo shaqeeyaha. Lacagta si toos ah ayey ESD ugu dirayaan shaqaalaha hal mar labadii todobaad.
Imisa weeye lacagta Fasaxa Caafimaadka iyo Qoyska?
Shaqaalaha waxaa la siinayaa boqoleey laga xisaabay mushaharkooda, iyada oo shaqaalaha dakhligoodu yar yahay la siinayo ilaa 90% mushaharkoodaa halka shaqaalaha mushaharka badan qaatay la siinayo wax yar oo ka mid ah mushaharkii ay qaadan jireen. Lacagta ugu badan ee todobaadka kama badan karto $1,000, taas waxaa loola jeedaa shaqaalaha dakhligoodu yahay $81,000 sanadkii lama siinayo wax ka badan $1,000 todobaadkii. Isticmaal kombiyuutarkeena si aad u xisaabto lacagta fasaxa caafimaadka iyo qoyska!
Talaabooyinka Aad Qaadeyso!
MomsRising waxa ay doonayaan in aad ku caawiso in aad faafiso warkan, gaar ahaan bulshada dhexdeeda ee saaxibadaa, qoyskiina, iyo deriska si dad badan uga faa’iideystaan barnaamijkan cusub.
Ka soo dajiso internetka xayeysiiska barnaamijka si aad dadka u gaarsiiso.
La Xiriirka Hogaamiyayaasha Ganacsiga!
Qoysku waa halbowlaha ganacsatada yaryar oo dhan! Lacagta Barnaamijka Fasaxa Caafimaadka iyo Qoyska waa mid dadka oo dhan simeysa iyada oo ganacsatada yaryar loo fidinayo gargaarka ay u baahan yihiin si dhamaan shaqaaluhu u wehliyaan qoysaskooda xilliga ay ugu baahan badan yihiin waqtina la qaataan. Shaqaaluhu waxa ay ka codsanayaan oo lacagta si toos ah u siinaya Waaxda Ceymiska Shaqada (ESD), iyada oo macluumaad aad u kooban laga doonayo loo shaqeeyaha. Waxaanu kaaga jawaabeynaa su’aalaha aad qabtaan ee ku saabsan lacagta uu bixiyo barnaamijka fasaxa caafimaadka iyo qoyka ee Washington iyo sida adiga iyo loo shaqeeyuhuba uga qeyb qaadan karaan.
Ma khasab ayey ku tahay in loo sahqeeyuhu lacag ku daro?
Ganacsatada ay u shaqeeyaan wax ka yar 50 shaqaale (oo ah 96% ganacsiga Washington) waxa ay kala dooanayaan in ay ceymiska lacag ku bixiyaan ama shaqaalahooda aanu wax lacag ah siin Ceymiska Shaqada ee Washington (ESD).
Gargaarka Ganacsatada yar ma loo fidinayaa?
Goobaha ganacsiga ee doorta in ay bixiyaan lacagta ceymiska ee bil kasta, oo tirada shaqaalahoodu ka yar tahay 150, waxaa la siinaya ilaa 3,000 si ay ugu bixiyaan kharashka kaga baxa inta shaqaaluhu shaqada ka maqan yahay. Goobaha ganacsiga waxa ay codsan karaan ilaa 10 jeer gargaarka noocaas ah.
Nagu caawi in ay bulshada iyo maamulayaasha ganacsigu ogaadaan! Qeybi xayeysiiska barnaamija ee Ganacsatada Bixinta Fasaxa Caafimaadka iyo Qoyska ee ganacstada degaanka.
Ujeeddada laga leeyahay boggan inetrnetka waa in laga helo macluumaad wanaagsan oo ku saabsan Barnaamijka Lacagta La siiyo Fasaxa Caafimaadka Qoyska Looguma talo gelin in lagu ogaado in qofku xaq u leeyahay inuu ka qeyb qaadan karo iyo in kale ama inta ay tahay lacagta uu ka helayo barnaamijka fasaxa caafimaadka iyo qoyska.